Ny fanatanjahan-tena manodidina ny vehivavy dia mahomby amin'ny fahaverezan'ny fahavoazana, saingy tena sarotra izy ireo, noho izany ho an'ny vao manomboka dia tsy mety ny fiofanana ity safidy ity. Ny vokatra avo lenta tahaka izany dia vokatry ny fahafahanao miasa amin'ny tarika muscle amin'ny fotoana rehetra.
Ny fanombohana dia ilaina ny manao drafitra momba ny asa, ary azo atao ny mampihatra sasantsasany amin'ny fampiasana ny vatana tsirairay na hampiofanana azy ireo manokana. Ny fiheverana ny fampiofanana momba ny famerenana an-tariby ho an'ny tovovavy dia mila mieritreritra ianao fa tokony hanomboka amin'ny fampakaram-bary mba hanomanana ny vatana ho amin'ny asa. Ny singa iray dia ahitana ny fomba fampiasana tsotra voalohany avy eo, ary avy eo dia sarotra. Mba hampitomboana ny fahaiza-manao, dia avela hampiasa lanja fanampiny, fa tsy tokony ho lehibe. Ho an'ny fampiofanana, dia ilaina ny fampiharana 10-12, ary ny faribolana dia tokony averina indroa farafaharatsiny. Eo anelanelan'ny famolavolana dia misy fiatoana tsy atao mihoatra ny iray minitra. Ny fampiharana tsirairay ao anatin'ny faribolana dia averimberina in-10-10 heny, ary tokony hiasa mandra-pahatapitra ny hozak'izy ireo. Ny faharetan'ny fiofanana dia tsy tokony mihoatra ny antsasak'adiny. Azonao atao ny miseho 2-3 isan-kerinandro.
Fanazaran-tena ho an'ny fampiofanana:
Push-ups . Makà toerana miavaka, mifantoka amin'ny fitaovam-piadianao, izay tokony ho kely kokoa noho ny soroka. Midina, manetsiketsika ny sandrinao eo amin'ny elany, ary alamino avy hatrany. Mialà haingana dia haingana, fa mitazà ny teknika.
"Mountaineer" . Aza manova ny toerana fanombohana. Ankoatra izany, arotsaho amin'ny lohalika ny lohalinao ary ento ao amin'ny tratrao izy ireo. Mihazakazaha eny amin'ny toeram-piasana miala amin'ny haingana indrindra.
Fanodinkodinam-peo . Mipetraha eo an-damosinao, tazony eo akaikinao ny tananao ary atsangano ny tampon'ny vatanao ary mandohaliha. Atsipazo ny kofehy ary ny lohalika mifanohitra, ary esory ny tongotra hafa.
Jumping . Mitsangàna havanana ary mitsambikina, manangana ny tananao eo ambonin'ny lohanao. Rehefa mipetraka eo amin'ny tany ianao dia apetraho ny tongotrao mba hahatonga ny elanelana eo anelanelan'izy ireo dia lehibe kokoa noho ny sorokao. Ataovy ny tifitra manaraka, ampifandraiso ny tongotra.
Squats . Aza manova ny toerana fanombohana ary atsangano ny tananao. Manaova hobin-kisendrasendra , alohan'ny hanamboarana ny feny amin'ny paroasy. Amin'izay fotoana izay dia asandrato ny tananao eo anoloanao. Mitandrema fa tsy mandeha ny kiraro ny lohalinao. Rehefa mitaingina dia afoy ny tananao.
Tsara homarihina fa ny fampiofanana sangany ao an-trano ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy dia manampy amin'ny fiatrehana ny lanjan'ny tavy sy ny tonony, saingy tsy manohana ny fitomboany izany.
Fiofanana ho an'ny vehivavy
Hymnalista Tibetana gymnastika ho an'ny fahasalamana sy fanoloran-tena
Inona no tsaratsara kokoa?
Rahoviana hisotro ny proteinina?
Fomba ahoana no haka proteinina casein?
Ahoana ny fomba hianaranao hanao tetezana avy amin'ny toerana misy azy?
Ny lovantsofin'i Espaina
Vetivety dia miala amin'ny maotera ve ianao?
Fetin'ny Virjiny Masina Maria
Ny fiainan'ny tena manokana Gwendolin Christie
Inona ireo kitapo mena amin'ny 2015?
Fomba hankalaza ny Krismasy - famantarana
Seth McFarlane dia niresaka momba ny fomba nisehoan'i Charlize Theron tao amin'ny fahitalavitra "Orville"
Famaranana automaty fanakanana
Tess Holliday dia lasa reny fanindroany
Sakafo mahandro sakafo
Endometriose - fitsaboana amin'ny dokotera